Ungawathumela kanjani ngesandla amanothi kumilayezo ye-iOS 10 | Ngivela kwa-mac
Uhlelo lokusebenza lweMilayezo ku-iOS 10 lukhishwe ngokuphelele futhi lwenziwa ngcono. Manje hlanganisa okuningi kwe- izici ezintsha lokho kucebisa futhi kwenza izingxoxo nabangane bethu nomndeni kube mnandi kakhulu.
Enye yezinto ezintsha ezivelele ukufakwa kwe- ukwesekwa kokubhala ngesandla. Lokhu kusivumela ukuthi sikwazi ukuthumela imiyalezo ebhalwe ngesandla koxhumana nabo. Ake sibone ukuthi isebenza kanjani.
Bhala futhi wabelane ngemilayezo ebhalwe ngesandla ku-iOS 10
Imodi yokubhala ngesandla ihlanganiswe nohlelo lokusebenza lwemilayezo ye-iOS 10. Kodwa-ke, iqiniso ukuthi lifihlekile kancane ku-iPhone, ngoba inkinobho yokuyisebenzisa ngeke iboniswe ngaphandle kokuthi uku-landscape mode.
Ake sibone ukuthi ungasisebenzisa kanjani lesi sici esisha:
Ku-iPhone, uzodinga ukuvula idivayisi iye kumodi yokwakheka kwezwe. Ku-iPad, ungasebenzisa ukubhala kuzo zombili imodi ye-portrait neye-landscape.
Thinta uhlaka lokubhala ngesandla ozobona kukhibhodi yedivayisi yakho. Ku-iPhone 6 no-6s, isikrini sokubhala ngesandla sizovuleka ngokuzenzekelayo.
Sebenzisa umunwe owodwa ukubhala esikrinini ongathanda ukukusho. Lapho usufinyelele ezansi kwesikrini, cindezela umcibisholo wembondela uma ufuna ukuqhubeka uthayiphe. Ungaphindela emuva ekuqaleni ngokuthepha kweminwe emibili.
Ngenye indlela, ungasebenzisa ezinye zezisho esezivele zifakiwe Kubandakanya amabinzana afana nokuthi "ngiyabonga," "usuku lokuzalwa oluhle," nokuthi "ngiyaxolisa."
Uma usuqedile, cindezela "Kwenziwe" ukuze ubuyele kukhibhodi ejwayelekile. Umlayezo wakho obhalwe ngesandla uzotholakala njengesithombe ozosithumela ebhokisini lemiyalezo.
Ngemuva kokuthumela umyalezo obhalwe ngesandla komunye woxhumana nabo, izokhonjiswa njengopopayi omncane okhombisa umamukeli ukuthi lowo mlayezo ubhalwa kanjani. Imilayezo ebhalwe ngesandla ingabukwa kuphela ngaphakathi kohlelo lokusebenza lwemilayezo. Izaziso zimane zisho ukuthi "umlayezo obhalwe ngesandla utholakele."
Ubude bomyalezo bunqunyelwe kwizikrini ezimbili ku-iPhone noma i-iPad, ngakho-ke umsebenzi wokubhala wesandla wenzelwe imisho emifushane kuhloswe ukugcwalisa imiyalezo emide. Ngaphezu kwalokho, ungayisebenzisa futhi ukuthumela imidwebo emincane, njenge-Digital Touch
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungawathumela kanjani amanothi kwimilayezo ye-iOS 10
Ukuphoxeka kochungechunge lwe-Apple Watch 2. Ukuvela kancane ngentengo ephezulu